Doorashada Kursigii Hirshabeelle ee horay loo laalay oo maanta ka dhaceysa Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Doorasho ku celis ah oo ka mid ahaa 5-tii kursi ee horay loo laalay ayaa maanta ka dhaceysa magaalada Muqdisho, kaasoo ah Kursigii Aqalka Hoose ee Hirshabeelle uu horay ugu soo baxay Wasiirkii Dhalinyarada Maxamed C/llaahi Xasan Nuux, balse Guddigii doorashada ay qaadaceen.
Doorashada Kusigan Beesha Jidle ayaa waxaa ku tartamaya illaa lix Musharax oo labo ka mid ah ay yihiin Haween, iyadoo ay ku jiraan Musharaxiintii horay looga joojiyay Tartankan kursigan oo loo ogolaaday inay ka qeyb galaan dib u doorashada kursigan.
Guddiga doorashada dadban ayaa bishii December ee sanadkii hore qaadacay kursigan oo si aan waafaqsaneyn habraaca doorashada ugu soo baxay Maxamed Xasan Nuux oo horay looga mamnuucay inuu kursigan u tartamo, kadib qalalaaso ka dhalatay doorashadii kursiga Beesha Jidle ee ka dhacday magaalada Jowhar.
Doorashada kursigan ayaa goor dhow lagu wadaa inay ka dhacdo Dugsiga Sare ee Tababarka Booliska ee Jen. Kaahiye, waxaana Musharaxiinta ku tartamaya ay kala yihiin sidan:-
1- Hida C/llaahi Cumar
2- Nasra Axmed Cali
3- C/llaahi Axmed Xuseen
4- Nuur Bocor Jeelle
5- Maxamed C/llaahi Xasan Nuux
6- Axmed Sheekh nuur Cabdi
Doorashada kursigan ayaa ka mid ahaa kuraastii ugu muranka badnaa, iyadoo ay shaqaaqo sababtay dhaawacyo oo ka dhacday Jowhar.
Waxaa macquul ah in doorashada kursigan uu mar kale ku soo baxo Wasiirka Dhalinyarada Maxamed C/llaahi Xasan Nuux, maadaama saddex ka mid ah 5-tii kursi ee horay loo laalay dib loogu doortay xubnihii ay qaadaceen Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban.
Doorashada hal kursi oo la isku mari waayay, natiijadiisa ay jahwareer badan keentay ayaa dhiman, kaasoo ah kursiga Beesha Gaaljecel ee yaala magaalada Kismaayo, waxaana khamiistii dhacday doorashada kursigan oo ku celis aheyd, iyadoo aan cidna ku guuleysan, Guddiga doorashada ayaa la filayaa inay mar kale qabtaan doorashadan kursigan oo ay ku tartamayaan Wasiirkii Batroolka Maxamed Mukhtaar iyo C/llaahi Aadan Shaacir.